Hoax Kushambadzira? Ivar's Undersea Mabhodhi | Martech Zone
Zvinoenderana neYouTube, maawa makumi maviri nemaviri evhidhiyo anoiswa paminiti yega yega! Vashandisi veTwitter tweet 400 mamirioni nguva pazuva. Munyika izere neruzha, zvakaoma kuti chigadzirwa, webhusaiti, kana sevhisi inzwike. Izvo zvinotonyanya kuoma kana pasina chinhu chakasarudzika zvechokwadi pamusoro pechinhu chiri kutengeswa. Mazuva ese, vatengesi vanosangana nedambudziko rekukwira pamusoro peruzha. Mukutarisira kwekusimudzira kwekusika, ndinotendeukira kuna2009 uye yepasi pemvura bhodhi rebhodhi rakaitwa na Chikafu chegungwa cheIvar muSeattle, Washington.
Nhoroondo yaIvar yeKusika Kushambadzira
Ivar's yakavambwa naIvar Haglund, muimbi weSeattle muimbi akavaka yekutanga aquarium yeguta. Iyo yekudyira yakavambwa nekuti Ivar aifunga kuti zvaive kuchenjera kufudza vashanyi vemu aquarium yegungwa. Akapa maresitorendi ake masitayera asina kujairika, achienzanisira imwe yenzvimbo dzake mushure meiyo Indian longhouse. Kwemakumi emakore, akatsigira mafirework emuno anoshamisa, achikwevera vanhu vanopfuura mazana matatu ezviuru zhizha rega rega. Munzvimbo iyi, Ivar Haglund anga aine ngano.
Iwo Mabhodhi epasi pemvura
Ivar akatanga bhodhi remumvura pasi pemvura nekuzivisa kuwanikwa kwemagwaro kubva kuma1950 ayo akapa mepu kumabhodhi akange atangwa neresitorendi muPuget Sound. Zvichida, Haglund akafungidzira ramangwana apo vatengi vaizotyaira vega pasi pemvura ngarava dzepasi pemvura uye iye aive akaisa zvikwangwani muSound kuti awane mukana wekushambadzira kune ino yepasi pegungwa-kutyaira huwandu hwevanhu. Ipapo, nhau dzakapunzika dzekuti vafambisi vengarava vange vawana imwe yeaya echokwadi mabhodhi emabhodhi kubva pasi pePuget Sound. Bhiribhodi remapuranga rakawanikwa rakashambadza ndiro yeclam chowder nemasendi makumi manomwe nemashanu chete uye raive rakashongedzwa nependi yakasakara nemabarnacle. Mamwe mabhodhi akawanikwa zvakare.
Kana mamiriro emabhodhi akange asina kukwana kugutsa kumwe kwechokwadi kwavo, mumwe wevanyori vezvakaitika kare veSeattle akapfuurira mberi kuzosimbisa zvawanikwa. Paul Dorpat, munyori wenhoroondo weWashington State uye anonyanya kuzivikanwa mupepanhau muguta, akawedzera zita rake mumusanganiswa uyu nekupa chirevo achisimbisa kuti magwaro acho aive echokwadi. Maonero ake akavimbwa, akasanganiswa nekudyara kwakarongwa nekutsvaga kwemvura yekunyepedzera yakapfekwa zvikwangwani, zvaive zvakakwana kunyengetedza veruzhinji kuti mabhiribhodhi aive echokwadi. Kurangarira kuwanikwa, Ivar yakadzikisa mutengo wechlow chowder yayo kusvika pamasendi makumi manomwe neshanu mundiro imwe chete - mutengo mumwe chete unoratidzwa pane kushambadza.
Iyo Hoax Inovhurika
Ivar yaida kuti huchenjeri hurambe huchienderera kusvikira kusimudzira kwekushambadzira kwapera, asi mavhiri akatanga kubuda mushure mekunge mushandirapamwe wabata chiziviso chebhuku rinotungamira reresitorendi. Paakabvunzwa kuti ataure nezvenyaya iyi, Donegan akabvuma kuti kuwanikwa kwaive hutachiona hwekutengesa hutachiona hwakatora zvirinani kupfuura zvaitarisirwa. Kutevera kubvumidzwa uku, dzimwe nhengo dzeveruzhinji dzakatanga kushora vashandi vekambani yaIvar yekudyara zvikwangwani uye nekunyengera veruzhinji. Paul Dorpat, munyori wenhoroondo weWashington State akagamuchirawo kupisa kweruzhinji nekutamba pamwe neiyo stunt.
Maitiro Ekukanganisa Akabata Sei Pasi Pazasi Kambani
Zvisinei nezvechinguvana kushambadzirwa kwakaipa, uyu wekushambadzira wekushambadzira wakabudirira! Munguva yemushandirapamwe webhodhi, kutengeswa kweIvar's clam chowder kwakawedzera ne pamusoro pe 400 muzana, kusvetuka nekutengesa kunopfuura zviuru makumi matanhatu zvichienzaniswa negore rapfuura. Sezvinoratidzwa kubva muchinyorwa chino, vanhu vanorangarira iyi yekushambadzira mushandirapamwe uye vachiri kutaura nezvazvo. Kutsvaga kweGoogle kwe Ivar's Undersea Mabhodhi Hoax inodzosera pamusoro 360,000 mhinduro.
Zviripachena, chibvumirano chakanaka chekuronga uye kuuraya chakapinda mukugadzira Ivar's undersea mabhodhi ekunyepera kubudirira. Izvi zvinotevera makiyi ekutora ekuti iwe ufunge nezve ::
Paive nezvakagadzirwa zvaitendera kuti mafoto nemavhidhiyo atorwe sezvo zvakawanikwa zvepanyama.
Nyaya yacho yakatsigirwa nemunyori wenhoroondo akavimbika uye wemuno.
Iyo kambani yaive yakagadzirira uye yakapihwa mari pane rwekushambadzira pachena nekushandisa mari kushambadza iyo yakapenga nyaya uye yakadzikiswa clam chowder mutengo.
Iyo nyaya yaive yekunze asi ichitendeseka uye yakabata kutarisisa kwevanhu uye fungidziro.
Sezvauri kuona, timu kuIvar yakaenda pamusoro uye kupfuura zvakajairwa. Kana iwe uchizobudirira, iwe unofanirwa kuve unodisa kuita izvo vamwe vasingadi kuita. Gadzira chimwe chinhu chisina musoro mhando. Unyanzvi nyaya inonakidza uye semi-inotendwa. Usatsigire chinzvimbo quo. Mukushambadzira, kirimu inonyatsokwira kumusoro.
Tags: bhiribhodhi hoaxhoaxkushambadzira kwekunyepaivarsivars billboard hoaxivars chowder
Vatengesi uye Kudzidza Kwemuchina: Vanokurumidza, Vakangwara, Vanobudirira
Yemagariro Buzz Kirabhu: Goverana uye Govana